KE, UCINGA UKUBA IIMOVIE ZESUPERHERO ZIYADIKA NGOKU ... - DC IIQHULO
Abathengisi Ghost Ii
Ke, ucinga ukuba iiMovie zeSuperhero ziyadika ngoku…
Ungacinga ukuba, emva kwalo lonke eli xesha, abantu baya kuthi ekugqibeleni baqale ukwamkela ukuba iimuvi ezibalaseleyo zilapha ukuze zihlale, kodwa kunjalo sinee-tweets kunye namanqaku athi ingxelo ebalaseleyo iyadika. Ngoba? Kuba abantu abanakho ukuvumela nabani na ukuba onwabele into ngaphandle kokuyigxeka ekufeni.
Ke, nini Iindaba zeSplinter beka inqaku ukubanga ukuba iimuvi ezibalaseleyo kufanele ziye esihogweni -Ngokuba ziyadika kwaye zonke ziyafana kwaye ezinye iintlobo zinendalo ngakumbi kwaye zibalulekile-ndijongile nje kwikhamera engumzekeliso njengoJim Halpert IOfisi , ndicela ukukhutshwa kamnandi kule mbudane.
sikwixesha elimnyama kakhulu
Nanga amagqabantshintshi ngazo zonke iimuvi ezibalaseleyo: Yiya esihogweni kwaye ungabuyi, wenza wonke umntu adike https://t.co/KZgJiQQZIy pic.twitter.com/UnUDrnvusI
-Splinter (@splinter_news) NgoJanuwari 8, 2019
Ingcebiso yepro: Lo mgca wesikhalazo malunga neemovie ze-superhero ungaphantsi kakhulu kunentsusa kunemovie ngokwazo.
Kodwa kuba ihlala ibuya… Kulula kakhulu: Ungazibukeli. Unexhala lokuba awuzukuba nanto uyibukeleyo? Ewe, ubuninzi beefilimu okwangoku kwindawo yemidlalo yeqonga (singasathethi ke ngeeyure ezininzi zeTV enkulu) zibonisa ukuba unokukhetha okuninzi! Ndifumanisa ukuba ayinguye wonke umntu okwi-superhero yohlobo, kodwa ukuba umama wam oneminyaka engama-68 ubudala angakonwabela I-Panther emnyama , Unokusivumela ukuba sibe neemovie zethu zeqhawe kwaye uhambe ngendlela yakho yokuvuya.
Akukho mntu unyanzela ukuba ubabukele, ukanti nanku ukhalaza ngobukho babo. Into malunga neemovie ze-superhero kukuba zithetha into eyahlukileyo kuye wonke umntu. Kum, bathetha ukubiza umnakwethu kwaye bathethe ithiyori. Bathetha ukuba, ngalo lonke ixesha ndisekhaya, mna naye siye siyobabona kwaye sijike njengoko sasinjalo xa ndandisengumntwana.
ellen iphepha lokugqibela kuthi ilizwi
Sisikhumbuzo sokuba bendihlala ndifunda ngamaqhawe omphefumlo kumkhuluwa wam, kwaye yayiyenye yezinto ezimbalwa esasithanda ukuzenza kunye. Ewe ewe, ndinendawo ethambileyo yendoda engenayo ihempe ephosa itanki esakhiweni, kodwa oko akuthethi ukuba andikwazi nokuya kubukela Umfana Omhle kwaye uhlalutye ifilimu ngezinyembezi zam.
Mhlawumbi ndingumntu ojikeleze kakuhle onokuhamba ukonwabela imovie yeqhawe ngelixa kanjalo ukonwabela ezinye iintlobo zeemovie. Ukuba iimuvi ezigqwesileyo ziya esihogweni, ndiya kanye nazo.
Ndiyakonwabela ukuphulukana nam kwiincoko ezibalaseleyo, ndibukele njengoko uBucky Barnes efuna nje ukwenza nto kodwa abaleke kumlo abaqhubeka bemphosa kuwo. Mhlawumbi kungenxa yokuba ndiziva ngokungathi ndihlala ndiphoswa kwezi bhanyabhanya ziphambili azisiyonto ilungileyo yokulwa nabantu rhoqo.
Nantsi into ekufuneka uyenzile endaweni yoko: Inkxaso yemovie ye-indie ekufuneka uyithande ngaphezulu kwebhloko enkulu ye-blockbuster superhero. Bhala ngazo. Banike ingxelo. (Uyazi, into endiyenzayo nam. Nceda uye kubona Umtshabalalisi kunye nerente Ukubona okungaboniyo .)
shiya umfazi kuNatalie portman
Kuyadinisa ukubona abantu bekhalaza malunga neemovie ezibalaseleyo, nokuba baphose umfanekiso omkhulu wabo okanye babathiyile kuba wonke umntu uyakonwabela ukuthetha ngazo.
Ukudinwa: Ukukhalaza ngohlobo lwefilimu ngenxa yokuba ungayithandi.
Iingcingo: Ngokwenyani uxhasa uhlobo oluthandayo kunye nokuvumela abanye abantu ukuba bonwabele izinto.
Ihelewig Kunye Ne-Intshi Enomsindo
adam uyonakalisa yonke into ebuyela umva
ngabafana abathandana nesini
uncanyiswe yingoma yere rose
inyoka yeemfazwe zemfazwe ingqayi
Umlingo wesikolo sebhasi vs umphathi weplanethi